ငွေသား Stax | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့! ငွေသား Stax | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့!
ငွေသား Stax ဒါကြောင့်ကစားရန်ရိုးရှင်းအဖြစ်ကစားသမားများအတွက်အဖြစ်ဖျော်ဖြေမှုဖြစ်သောတစ်ဦးအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါဂိမ်းတစ်ခု optional ကိုအပို feature ကိုထွက်လာပါတယ်နေဖြင့်ထပ်မံတိုးမြှင့်နိုင်မဆိုသာမန်ထက် features တွေမပါဘဲလည်းအလွန်ရိုးရှင်းပြီး. ဒီဂိမ်းမှာကစားများနှင့်ပျော်မွေ့နိုင်ပါ အသီးကာစီနိုဆိုက်.
ငွေ Stax ၏ရေးသားသူအကြောင်း
နိုင်ငံတကာထီနှင့်လိုင်စင်ရဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တစ်ဦးကဦးဆောင်ဖန်တီးသူနှင့် developer, သိပ္ပံနည်းကျအားကစားပြိုင်ပွဲ, အများကြီးသာလွန်အရည်အသွေးကိုအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းကိုတီထွင်ထားပါတယ်. ဒီဂိမ်းကုမ္ပဏီကတီထွင်မှာကစားရန်မရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် အသီးကာစီနိုဆိုက်.
ဂိမ်းများ၏ဂိမ်းတော်တော် Uncomplicated သည်နှင့်ကပါဝင်ပတ်သက်5အတူ reels 10 အစအဦး၌အ paylines. အဆိုပါဂိမ်းမျက်နှာပြင်အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့် reels လှည့်ဖျားမှစတင်ချိန်မှာဂိမ်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရရှိသွားတဲ့. ဒီအကွာအဝေး အသီးကာစီနိုဆိုက် ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ် 0.10 သို့ 400 လှည့်ဖျားနှုန်းခရက်ဒစ်. အလောင်းအစားဖြစ်တဲ့အခါ2ခရက်ဒစ်, 20 paylines အဲဒီအခြိနျမှာတက်ကြွစွာဖြစ်လာ. အဆိုပါ reels သာကြီးမားသော X ကိုအရိပ်လက္ခဏာရှိ, ဤသည်၌အခြေခံသင်္ကေတအဖြစ်ဘား icon များနှင့်ခုနစ်လီ အသီးကာစီနိုဆိုက် ဂိမ်း.
ဒီ၏အခြားအင်္ဂါရပ်များ အသီးကာစီနိုဆိုက် အထိုင်များမှာ:
ရိုင်းသော- အဆိုပါ Joker ပိုပြီးအနိုင်ရအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးပေးဖို့ရွှေစက်ဝိုင်းဆုကြေးငွေသင်္ကေတဖယ်ထုတ်ပြီးရှိသမျှသည်အခြားသောသင်္ကေတအဘို့အ substitutes သောဤဂိမ်း၏ရိုင်းသင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်.
Big လောင်းကစားဂိမ်းများ- ဤသူသည်သင်တို့အားဖြင့်ကျပန်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ကာရွေးချယ်နိုင် feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. ရှိသောဤအင်္ဂါရပ်ထဲမှာကစားသမားငါးဦးလှည့်ခြင်းများ 30 သင်ပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိနိုင်သည့်အပေါ် paylines. ဒါဟာလွန်စွာသင့်ရဲ့အနိုင်ရတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်. ဒီဆုကြေးငွေအင်္ဂါရပ်နေစဉ်အတွင်းအခမဲ့လှည့်ဖျားအင်္ဂါရပ်ကိုသက်ဝင်၏ဖြစ်နိုင်ခြေလည်းရှိပါတယ်.
အခမဲ့လှည့်ဖျား- အတူတူလှည့်ဖျားနေစဉ်အတွင်းအားလုံးငါး reels အပေါ်ရွှေစက်ဝိုင်းဆုကြေးငွေသင်္ကေတလေယာဉ်ဆင်းသက်ဒီ feature ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်း. အဆိုပါ reels ၏တစ်ဦးချင်းစီ၏ထိပ်ပေါ်မှာဗလာ slot နှစ်ခုရှိပါတယ်. သင်တစ်ဦးလွှင့ဆင်းသက်အခါတိုင်း, ကြောင်း reel ထိပ်ပေါ်အချည်းနှီးသော slot ကအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေ၏တူညီသောအရေအတွက်အားလက်ခံရယူ. သငျသညျသူအပေါငျးတို့ slot နှစ်ခုရှိအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေအရေအတွက်သင်ရရှိအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ၏နံပါတ်ဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါ feature ကိုကစားလျက်ရှိသည်အခါ reels အပေါ်လေယာဉ်ဆင်းသက်မဆိုအပိုကြဲဖြန့် icon တွေကိုသင်တစ်ဦးအပိုဆောင်းအခမဲ့လှည့်ဖျားပေးရန်လိမ့်မယ်. အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေ၏အချို့သောအရေအတွက်ကလည်းသင်တစ်ဦးငါးကြိမ်မြှောက်ကိန်းရစေခြင်းငှါ.
ငွေသား Stax လွယ်ကူသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့်အတူအဆင်ပြေနေသောလေးနက်ကစားသမားများအတွက်စုံလင်သည်, အနည်းငယ်ဆုကြေးငွေကျည်များနှင့်ရိုးရှင်းသောဂိမ်းပေမယ့်အကြီးအကအနိုင်ဂိုးအလားအလာရှိပါတယ်တဲ့ဂိမ်းချင်ပါတယ်.
ဘားဘားက Black သိုး5ရက်ကြောင့်မှားယွင်း